Dadka Cad - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan guud ahaan dad cad. Maqaalo kale fiiri dadka cad ee reer Yurub.
Dadka Cad (ingiriis: white people; carabi: عرق أبيض) isir ahaan loo yaqaano "Qooqaasiyaan" (causcasian) waa dad midab cadaan ah leh kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda qaarada Yurub laakiin maanta ku nool meelo badan oo aduunka ah.
Fikrada ah kala saarka iyo soocitaanka aadamaha waxay bilaabantey qarnigii 17aad goortii uu socday ganacsiga adoonta ee qaarada Afrika laga soo gurayay Dadka Madoow, si loogu shaqeeysto Ameerika dhexdeeda.
Wakhtiyadii ka dambeeyay waxaa caan noqotey firkada ah in dadka caalamku u kala baxaan cadaan, dad madoow, kuwo midab ah iyo kuwo huruud ah.
Guud ahaan, dadka cad waxay maanta ku dhaqan yihiin meel kasta oo caalamka ka mid ah, waxayna aad ugu badan yihiin qaarada Yurub, qaaradaha Ameerika (waxay xoog u degaan Waqooyiga Ameerika sida Maraykanka iyo Kanada; laakiin kama maqna wadanada Koonfur Ameerika), Ustareliya, iyo Bariga dhexe meelo badan oo Aasiya ah iyo qaarada Afrika ooy si badan u dagan yihiin wadanada Koonfurta Afrika.
Gabadh model ah u dhalatay wadanka Arjantiina
atariisho u dhalatay Ustareliya
Atariisho Fiorella Mattheis reer Barasiil
Heesaa Kanadiyaan Avril Lavigne
Boqoradii Henry VIII ee Ingiriiska
Boqorada Ingiriiska Queen Victoria
Saynisyahan u dhashay wadanka Faransiiska Louis Pasteur
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin
Madaxweynihii kowaad ee wadanka Maraykanka George Washington
Madaxweynihii 35aad ee Maraykanka John F. Kennedy
Xoghayaha arimaha dibada Maraykanka Hillary Clinton
Superiseel Gisele Bündchen oo reer Barasiil.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dadka_Cad&oldid=209643"